माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको आगामी दिन जेलमा हुने संकेत ! « Dainiki
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १९:३४
माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको आगामी दिन जेलमा हुने संकेत !
१६ चैत, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको आगामी दिन जेलमा हुने संकेत केहीले गरेका छन । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयमात्र गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारबाट बच्नकै लागि नेपाल र भट्टराइले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाइ दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेको रिट निवेदक अधिवक्ताको दाबी छ । सर्वोच्चले उक्त निर्णय नीतिगत नभएको ठहर गरेको खण्डामा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयको विरूद्धमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरूद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुल्छ ।
प्रकाशित मिति: १६ चैत्र २०७७, सोमबार १९:३४